Ufufu hwemagetsi - Handina chokupfekazve
Mhinduro yekupfekedzwa kwemastile
"Handina chinhu chokupfekazve!" Ndiani asingazivi mutongo uyu kubva pamuromo wemukadzi akafanana naye zuva rega rega pamberi pepfeko yake yose uye asingazivi chaanofanira kupfeka? Mhosva yakasvibiswa yehembe. Asi ... rubatsiro rwava kusvika!
Ufufu hwemishonga - kusarudzwa kwakaoma
"Mangwanani!" Inonzwika kubva kuredhiyo "Nhasi izuva rakanyarara. Nyeredzi dziri kutarisa. Icho chiri pedyo ne07.00 clock uye vamwe vanosimudza kubva kare vari kutotanga kushanda. "
Utsifu hwemagetsi - Handina CHINHU chokufuka!
Achiri zvachose overslept kwamuri ikozvino anomira ipapo pamberi kwake wenguo uye havazivi kuti kupfeka: Mumwe vakadzi vakawanda munyika muno chete ine zvakawanda kupfeka muwadhiropu vasingachadi anoziva kunyange zvavari nokuti zvino kukwezva ,
Izvo nhasi, pazuva rino rinokosha, apo mutungamiriri wechipatimendi achamukumbira kutaura pamberi pevashandi vakaungana, haana kuwana zvaanenge achitsvaka. Anofunga nezvekubatana kwakasiyana-siyana. Mabhesi nemabhuruti zvakabvaruka kubva mutemberi ndokuedzwa.
Nguva iri kupera uye iye achiri kusati awana chero chinhu chingamufadza iye nokuda kwezuva rino rinokosha. Pakupedzisira, iyo ndiyo zvakare inowanzosvibira jira uye inowanzopfekedzwa jira rakasviba. Ndiani asingazivi izvi?
Chii chinonzi kupfeka upofu?
Upofu hwemagetsi hunonyanya kuzivikanwa nevakadzi, avo pasinei nekusarudzwa kwakawanda kunowira mukusagadzikana kwemavara kune dzimwe nguva pazuva. Pakurasikirwa, vakadzi vanomira pamberi pekamuri uye havazivi chatinofanira kupfeka. Sezvo vakadzi vachivimba nekunzwa kwavo, asi kazhinji nguva vachivaudza kuti ivo vane mafuta, zvakaoma zvikuru kuwana rusununguko.
Ko murume wepabonde anogona kubatsira pano here?
Ungabatsira sei? Muchidimbu, "HASI KUENDA". Kuti urege kuisa pangozi ukama hukuru hwehukama, zvingava nani kungozvidzivirira mumamiriro ezvinhu akadaro. Kunyangwe mazwi ane rudo haagoni kubatsira pano. Zvose zvinotsanangurwa zvakasiyana zvakasiyana pane imwe inogona kureva. Nokuti anoti "Ndinofunga kuti zvinokusungira iwe", anopindura "iwe unogara uchitaura" uye anoti "Handifariri zvakadaro" anogumisa "iwe unofunga kuti ndine mafuta?"
Vakadzi vasingazivikanwi vanofanira kungotarisa chipfeko chezuva rakatevera usiku huno zvisati zvaitika.
Ufofu hwemagetsi hwakarongedza kunze
Zvakanakira ndechokuti iwe une pfungwa yakanyatsojeka pakusisina nguva yekumanikidzirwa kufungisisa pamusoro pechinhu chaizova chakanaka uye kunoponesa nguva inokosha mangwanani-ngwanani. Saka iwe unotanga zvakare zvakare mune mafungiro akanaka mukati mezuva.
Imwe nzira yekugadzirisa iyo "dambudziko" ndeyekugogodza wardrobe. Zvidzidzo zvinoratidza kuti 20 chete yezvokupfeka muimba yekamuri ndiyo inopfeka nguva dzose.
Nzira yechitatu ndiyo yekare yainzi "svinudza meso ako". Ingovhomora meso ako kumusoro uye pasi nemunwe wako pamberi pembambo yezvokupfeka kusvikira iwe umira nechiitiko pane imwe chikamu. Uye ndizvo chaizvo izvo zvinokwezva, pasina kufunga nezvazvo.
Nzira iyi chete inogona kusvimha misodzi uye kuwira pamberi pepasiro nemashoko okuti "Handina chinhu chokupfeka!" Pane imwe nzvimbo ingadziviswa.
Yoga nguo nemidziyo
Kuchengetedza peji kutarisa beach volleyball
Coloring peji fashion fashion boxes
Coloring page fitness fitness